Xaqiiqooyin ku aaddan kulanka Premier League ee caawa u dhexeeya Kooxaha Chelsea iyo Everton – Gool FM
Xaqiiqooyin ku aaddan kulanka Premier League ee caawa u dhexeeya Kooxaha Chelsea iyo Everton
Haaruun December 16, 2021
(London) 16 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa caawa kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League waxa ay Naadiga Everton ku soo dhoweynaysaa garoonkeeda Stamford Bridge, marka ay saacadda geeska Afrika tahay 10:45 Habeennimo.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa xaqiiqooyin aad u baahan tahay intaad ogaato ka hor kulanka caawa.
Xaqiiqooyin ku aaddan kulanka adag ee caawa u dhexeeya Kooxaha Chelsea iyo Everton:-
>- Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah 26-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Everton, waxaana ay ka haysataa 15 guul iyo 11 barbaro tan iyo markii ay guuldarro kala kulmeen bishii November ee sanadkii 1994-kii.
>- Blues haddii ay caawa guuldarro ka fogaadaan waxa ay barbareyn doonaan rikoorkii guuldarro la’aan ee ugu dheeraa garoonkooda oo ay hal koox ku wajahaan taariikhda horyaalka, kaasoo ahaa inaysan wax guuldarro ah kala kulmin 27 kulan oo ay Tottenham horyaalka ku qaabileen garoonkooda intii u dhexeysay 1990-kii iyo 2016-kii.
>- Everton ayaa guuleysatay saddex ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku wajahday Chelsea, waxaana ay labada kulan ee kale kala kulmeen guuldarro, waana in ka badan 15 kulan ee hore oo ay wajaheen iyaga, si kastaba ha noqotee, dhammaan guulahaas ayaa yimid iyadoo lagu ciyaarayey garoonka Goodison Park.
>- Kaddib markii ay gareen Liverpool dhammaan saddexdii kulan oo ay la ciyaareen tartammada oo dhan xilli ciyaareedkii 984-85, Everton ayaa guul la’aan ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajaheen Chelsea, markii ugu dambeeyey oo ay garaacaan Blues oo ah champion-ka Yurub waxay ahayd fasal ciyaareedkii 2012-13.
>- Dhammaan kooxaha ciyaaraya in ka badan hal kulan oo Premier League ah maalinta Khamiista ah, Chelsea ayaa haysata heerka guusha ugu fiican maalintaan ee tartankan, iyadoo badisay todobo ka mid ah 11-kii kulan ee sidan oo kale ay ciyaartay Khamiista horyaalka, waxaana ay haysataan guul 64 boqolkiiba.
>- Kaddib markii ay guuldarro la kulmeen afar ka mid ah shanteedii kulan ee ugu horreeyey oo ay maalinta khamiista ah ciyaartay horyaalka Premier League intii u dhexeysay 1996-kii iyo 2015-kii, kulanka kalena ay barbaro galeen, Everton guuldarro la’aan ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay maalintaan khamiista ah tartankan, waxaana ay guuleysteen labo kulan, halka ay barbaro galeen saddexda kulan ee kale.
>- Mason Mount ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyey Chelsea ee gool dhaliya afar kulan oo xiriir ah horyaalka tan iyo Eden Hazard oo sidaasi sameeyey laga soo bilaabo bishii October illaa November ee sanadkii 2016-kii.
>- Chelsea ayaa laga dhaliyey sagaal gool afartii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartammada oo dhan waana in ka badan inta gool ee laga dhaliyey 21-keedii kulan ee ugu horreeyey xilli ciyaareedkan.
>- Ma jiro macallin horay u soo layliyey Chelsea oo inta booqday guul kaga soo gaaray Blues horyaalka Premier League, caawana waxaa kooxda Galbeedka London booqan doona macallinkoodii hore ee Rafael Benitez.
Messi oo farriin murugo leh kaga falceliyay kaddib markii uu Aguero ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta
Xaqiiqooyin ku aaddan kulanka Premier League ee caawa dhexmari doona Kooxaha Liverpool iyo Newcastle United